Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၁)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 12, 2016 at 10:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
“An idiom isaspecial kind of phrase. It isagroup of words which haveadifferent meaning when used together from the one it would have if the meaning of each word were taken individually” (Collins Cobuild Idioms Dictionary. Introduction page V)
“Kill two birds with one stone,” means “achieve two things atasame time”
(မြန်မာဘာသာစကားအရဆိုလျှင် "တချက်ခုတ်၊နှစ်ချက်ပြတ်" ဆိုသကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။)
Idioms ကို "သာလွန်၊ကျောင်းသားသုံး အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအိတ်ဆောင်အဘိဓာန်အရ၊ "အသုံးထူးသည့် စကားလုံး၊ စကားစု"ဟုဖွင့်ဆိုပါသည်။
Collins Idioms Dictionary မှ idioms အမြောက်အများရှိသည့်အနက်၊လူသုံးများရေပန်းစားသည့် idioms များနှင့် မြန်မာဘာသာတွင်လည်း အလားတူအသုံးပြုလေ့ရှိသည့် idioms များကို ရွေးချယ် တင်ပြပါသည်။
စာရှုသူများ၏ပိုမိုရင့်ကျက်ကောင်းမွန်သည့်အကြံပြုချက်များ၊ မြန်မာမှုပြုရာတွင် ပို၍သင့်လျော်သော အသုံးအနှုန်းများကိုဝေဝေဆာဆာ ကောင်းသထက်ကောင်းမွန်စေရန် ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးချက်များ ကို လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
၁။ the apple of your eye
eg. “I was the apple of my father’s eye”
ဟုဆိုရာတွင် "အဖေ့မျက်ခြယ်" (အဖေ့အချစ်တုံးလေး) ဟု ဆိုလိုပါသည်။
၂။ at arm's length
မြန်မာအဓိပ္ပာယ်အရ၊ လက်ပွန်းတတည်းမနေခြင်း၊ ခပ်တန်းတန်းနေတယ်၊ သိပ်အရောတဝင်မရှိ စသည့် အဓိပ္ပာယ်များကို ဆောင်ပါသည်။
၃။ with open arms
မြန်မာအဆိုအရတော့ "ရင်ဖွင့်ကြိုတယ်" လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လှိုက်လှဲပျူငှါမှုရှိတာကို ဆိုလိုတာပါ။
၄။ A stab in the back/ A back stabbing
မြန်မာအဓိပ္ပာယ်အရ "နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုး"၊ "ကျောချမှဓားပြမှန်းသိ" ဆိုသကဲ့သို့ အယုံအကြည် မဲ့အောင်လုပ်ခြင်းမျိုးကိုဆိုပါသည်။
၅။ A mixed bag
မြန်မာအလိုအရ "အုတ်အရောရော၊ကျောက်အရောရော" ရောပြွမ်းနေမှုမျိုးကိုဆိုပါသည်။
၆။ A crystal ball
အနာဂတ်ကို ခန့်မှန်း၊ ဟောပြောသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ Crystal ball မှ ကြည့်ပါက၊ အနာဂတ်ကိုသိနိုင်သည်။
(ရှေးမြန်မာရုပ်ရှင်၊ သိုက်ကားများတွင် ကြေးမုံပြင်ကို သပ်၍ကြည့်လိုက်ပါက သိုက်အတွင်းရှိ သူများက၊ သိုက်မှ လူ့ပြည်သို့ရောက်ရှိနေသည့် လူများကို တွေ့မြင်ရသကဲ့သို့ နှင့်တူညီမည်ဟုထင်ပါသည်။)
၇။ Spill the beans
၈။ An eager beaver
This means very enthusiastic about work or very anxious to please other people. This expression is usually used to show that you find the behaviour foolish or annoying.
မြန်မာဘာသာတွင်လည်း "ဝီရိယရှိခြင်းကိုအကျိုးရှိသည်" ဟု မသုံးဘဲ တခါတရံတွင် ရယ်သွမ်းသွေးလိုသည့် သဘောဖြင့် "ဝီရိယအကျိုး၊စောစောနိုး" ဟူ ၍နောက်ပြောင်ပြောဆိုသောအခါမျိုးတွင်သုံးတတ်ပါသည်။
Note: beavers are often associated with hard work.
၉။ Draw blank
(1) to find someone or something and you drawablank when you cannot find them.
eg. I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and drewablank.
တခါတရံတွင်တစုံတခုသောပစ္စည်းပျောက်နေပါက နေရာအနှံ့လိုက်ရှာသော်လည်းမတွေ့နိုင်၍လက်လျှော့ လိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
(2) You are unable to remember something or to answeraquestion.
တခါတရံတွင်အကြောင်းတစုံတရာတခုကိုပြန်လည်စဉ်းစား၍မရခြင်း၊ အမေးတခုကိုပြန်မဖြေတတ်ခြင်း (စကားထာဝှက်ရာ၌အဖြေကိုမသိ၍ ပန်းပေးရခြင်း) တို့တွင်၊ "drawablank" ဟုသုံးပါသည်။
(3) Inasporting contest, ifateam or competitor drawablank, they do not score any goals or points.
မြန်မာ့idiomအနေဖြင့်လည်း "ဘဲဥမကွဲ" ဟုဆိုလိုပါကသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပါသည်။ ဂိုးမသွင်း နိုင်ခြင်း၊ အမှတ်ရအောင်မကစားနိုင်ခြင်းတို့ကိုဆိုပါသည်။
၁၀။ A blessing in disguise
This means "it causes problems and difficulties at first, but later it turns out to bring great benefits or advantages".
Eg. "Frank's illness provedablessing in disguise for it gave him strength and courage which he had not had before".
ဖျားနာရခြင်းသည် မကောင်းဟု ထင်မှတ်ရသော်လည်း ထိုဝေဒနာကိုခံစားရင်းဖြင့် ယခင်ကမကြုံဘူး၊ မရရှိဘူးသည့် ခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်များရှိလာခြင်းသည် "အဆိုးထဲမှ အကောင်းထွက်လာခြင်း"ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၁၁။ The blind leading the blind
Used in situations like whenaperson in charge is just as incapable of doing the task as the person whom they are meant to be helping or guiding.
၁၂။ Make your blood boils
မြန်မာစကားတွင်စိတ်ဆိုး၊ဒေါသထွက်၊ပေါက်ကွဲလာပါက "သွေးဆူသည်" ဟုသုံးသကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ In cold blood
eg. If one person killed another in cold blood it means that it was done inacalm and deliberate way rather than in anger or self defence.
ဒေါသအလျောက်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲသွေးအေးအေးဖြင့် လူသတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၁၄။ Out of the blue
This expression compares an unexpected event toabolt of lightning fromablue sky.
"out of the blue" ကို မမျှော်လင့်ထားဘဲ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေတွင်သုံးပါသည်။
၁၅။ In the same boat
၁၆။ Out of bounds
eg. The area has been out of bounds to foreigners for more thanamonth.
၁၇။ Pick someone's brain(s)
မိမိထက်ပို၍ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူထံမှ အကြံကောင်း၊ဥာဏ်ကောင်းတောင်းခံခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
၁၈။ Hold your breath
This means "waiting anxiously or excitedly to see what happens next."
eg. She had been holding her breath and hoping that agreement would be signed.
"သဘောတူလက်မှတ်ထိုးမှထိုးပေးပါ့မလားလို့မနည်းရင်မထားရတယ်" ဟူသည့်အခြေအနေမျိုးတွင် သုံးပါသည်။
၁၉။ Take your breath away
၂၀။ Brown asaberry
မြန်မာစကားတွင်လည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နေလောင်ထားပြီး မဲသဲနေလျှင် "မဲလိုက်တာ၊ ကျွဲကျ နေတာဘဲ" ဟု ခိုင်းနှိုင်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ်မှ ကိုးကားရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင်း (၆)
Permalink Reply by htaylim on January 12, 2016 at 13:52
Permalink Reply by Zin May Khaing on January 12, 2016 at 15:01
Permalink Reply by Chan Myae Aung on January 12, 2016 at 15:46
"I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and drawablank".
"I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and drewablank."
Permalink Reply by Thiha Htun on January 13, 2016 at 18:23
Very perfect, Thx
Permalink Reply by James Josh on January 20, 2016 at 12:39
Permalink Reply by htaylim on January 20, 2016 at 22:00
Permalink Reply by Shwe sin on January 23, 2016 at 18:17
Permalink Reply by kyi kyi on February 1, 2016 at 1:51